Dhageyso:-Maxay ka dhigan tahay tallaabada Kenya ee Kiiska Badda? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Maqal & Muuqaal Dhageyso:-Maxay ka dhigan tahay tallaabada Kenya ee Kiiska Badda?
Dhageyso:-Maxay ka dhigan tahay tallaabada Kenya ee Kiiska Badda?
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in u baahan tahay in qareeno difaaca oo cusub ay qorato, sidaas darteedna ay waqti dheeri ah u baahan tahay, iyada oo ay xusid mudan tahay in Soomaaliya ay diiday Codsiga Kenya.
Hadaba maxay ka dhigan tahay arrintaan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ah ku takhasusay oo la hadlay Voa-da ayaa sharaxaya.
Previous articleDaawo:-Wasiir Goodax oo sheegay in la xirayo Iskuulada qaar ee dalka
Next articleKenya-Somalia cold war continues amid security risks